Munaasibad Taageero Loogu Raadinayay Furashada Ururada Siyaasada Somaliland Oo Isu Bedeshay Rabshado Iyo Inay Dadkii Ka Qaybgalay Mar Keliya Albaabka Jiidhaan – Araweelo News Network (Archive)
Hargeysa(ANN) Kulan lagu qabtay caawa cawayskii hool ku yaala huteelka Maansoor ee magaalada Hargeysa ayaa mar keliya isu bedelay rabshad. Kadib markii ay dadkii halkaa isugu yimi mar keliya albaabka isu qabsadeen iyadoo qof walba naftiisa la cararayo. Kala yaaca
dadka ayaa ka dhashay. Kadib markii ay dadka hoolka fadhiyay maqleen sanqadh hoolka dushiisa ah, taas oo ay u qateen qarax kusoo fool leh, waxaana kukankaa oo ahaa mid taageero loogu raadinayay furashada ururada Siyaasada hadheeyay rabshado cabaar socday, kuwaas oo ka dhashay ka dib markii koox dhalinyaro ah oo ka soo hor jeeday hindisaha furashada ururada siyaasaddu ay furitaankii madashaasi ka bilaabeen qas, isla markaana caagado biyo ah ku tuureen hoolka ay fadhiyeen ka qeyb galayaashii, taas oo keentay in dadkii is jiidhaan oo ay albaabka isku qabsadaan, iyagoo aan hubsan waxa dhacay.
Goobta kulanka ayaa qasnayd qadar rubuc saac ah, waxaana dadka qaarkood isku tureen kuraasta, balse waxaana markii dambe goobta yimid ciidanka Booliska oo halkaasi ka qabtay afar dhalinyaro ah oo loo tirinayay inay ka dambeeyeen rabashadihii hadheeyay goobta. Ka dibna waxa si caadi ah u bilaabantay ujeedadii xafladaa oo ay ka soo qeyb galeen boqolaal qof oo u badnaa dhalinyaro. Waxa kale oo ka dhex muuqday siyaasiyiin iyo aqoonyahano taageersan in la furo ururada siyaasada, kuwaas oo ay ka mid ahaayeen Mujaahid Ibraahim Cabdilaahi Xuseen (Dhego-weyne), Guddoomiyihii olalihii xisbiga KULMIYE ee doorashadii Madaxtooyada u qaabilsanaa Gobolada galbeedka dalka Mr. Baashe Cabdi Gaboobe, Abwaan Maxamed Xaashi Dhamac (Gaariye), Wasiirkii hore ee Wasaarada Arrimaha Gudaha Ismaaciil Aadan Cismaan (Ismaaciil Yare), siyaasiyiin iyo aqoon yahano kale.
Mujaahid Ibraahim Dhego-weyne oo ka hadlay kulankaa ayaa xukuumadda ugu baaqay inay wax ka qabato dadkii ka dambeeyay rabashadihii ka dhacay goobta, waxa kale oo uu sheegay inay ummadda Somaliland ay xaq u leeyihiin inay ka qeyb galaan xuquudooda siyaasadda.
Ibraahim Dhego-weyne waxa uu Madaxweynaha Somaliland ugu baaqay inuu furo ururada siyaasada ka hor doorashada Goleyaasha deegaanka.
“Waxaan soo dhawaynayaa urur siyaasadeed lagaga dhawaaqay Magaalada Laascaanood, waxaan leeyahay waanu taageeraynaa inay dadka deegaankaasi samaystaan urur siyaasadeed oo ay iska dhigeen qorigii,”ayuu yidhi Ibraahim Dhego weyne.
Xafladaa waxa kale oo ka hadlay Guddoomiyihii olalihii doorashada u qaabilsanaa xisbiga KULMIYE gobolada galbeedka dalka Baashe Cabdi Gaboobe, wuxuuna sheegay in furista ururada siyaasadu ay tahay qodob dastuuri ah oo aan la is hortaagi Karin.